नेपाल प्रहरीले संकलन गर्‍यो देशभरबाट ९ हजार अक्सिजन सिलिन्डर – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: २१:१४:४०
काठमाडौं,। नेपाल प्रहरीले देशभरबाट अस्पताल प्रयोजनबाहेकमा प्रयोग हुँदै आएका करिब ९ हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरेको छ ।
बाँके जिल्लामा केही समय अघि एक युवतीको मृत्यु हुनेगरि भएको सडक दुर्घटना बैंक म्यानेजरसँग डेटिङ गएर फर्कदा भएको खुलेको छ ।
उक्त दर्घटनामा राप्रपा बाँकेकी नेतृ विन्दु चर्तीमगर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धम्बोझी शाखाका म्यानेजर विनोद पाण्डे घाइते भएका थिए भने संगिता मगरको ज्या न ग ए को थियो । नेपालगञ्ज कार्यालय भएको सेताखरी अनलाईनले यसबारे समाचार छापेको छ । सो अनलाइन अगिाडि लेख्छ, संगिताका श्रीमान विदेशमा रोजगारी गर्छन् ।
२०७७ पुष १५ गते दिउँसो उनीहरु डेटिङ्मा निस्किएका थिए । म्यानेजर पाण्डेले त्यस दिन वाणिज्य बैंकको बा १८ च ३६८६ नम्बरको गाडी ड्राइभरलाई नलगेर गाडी आफै चलाएर लगे ।सेतो खरीका अनुसार बैंक म्यानेजर पाण्डेको ती युवतीसँग कुनै नाता पर्दैन न एउटै गाउँ ठाउँका नै हुन् ।
बैंक म्यानेजर दाङ निवासी हुन् भने विन्दु र संगिता राझाँ निवासी हुन् सधैं बाहिर जाँदा बैंकको ड्राइभरलाई लिएर जाने बैंक म्यानेजरले किन त्यसदिन आफैंले चलाएर गाडी लगे त? दिन ढल्कन लाग्दा विन्दु र संगितालाई लिएर किन निस्किए त म्यानेजर पाण्डे?
भन्ने प्रश्न उक्त अनलाईनले उठाएको छ । बैंक म्यानेजर पाण्डेले चलाएको गाडि फर्कने बेला पूर्वी दिशाबाट आइरहेको वाणिज्य बैंकको टाटासुमो गाडी र पश्चिमबाट पूर्व गइरहेको ट्रक रातीको ८ बजेतिर बाँकेको शम्शेरगन्ज नजिक एक आपसमा ठो कि ए र उक्त दुर्घटना भएको थियो।भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्